Hiran State - News: HS:- War deg deg ah: Magaalada Kismaayo oo qarka u saaran in lagala wareego Shabaab
HS:- War deg deg ah: Magaalada Kismaayo oo qarka u saaran in lagala wareego Shabaab
HS:- Magaalada Kismaayo oo ah saldhiga ugu weyn ee argagixisada Soomaaliya ayaa mudo dhawr sano ah kedib ka baxeysa gacanta kooxda Shabaab iyo ajaanibta Al qacida kadib markii bad iyo bari ciidamo xoogan la soo dhoobay.
Ciidamada oo qiyaastii la sheegay iney magaalada u jiraan wax ka yar 58KM ayaa dhawr jiho qorsheynaya iney magaalada ka soo galaan iyadoona ay dhinaca hawada ka kaabayaan diyaaradaha dagaalka dalka Kenya walow loo maleynayo in ay dagaalka ka qeyb qaadan doonaan maraakiibta dagaalka ee ciidamada NATO ee fadhiya biyaha Soomaaliya.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee jubooyinka ayaa lagu soo waramayaa in ay maalmahii tagay dhalinyaro Shabaab ah ka iibsanayeen dhulal raqiis ah oo ay magaalada ku lahaayeen iyo baarbuur iyadoo la sheegayo in ay baabuurta ka iibsanayaan ajaaniibta oo dalka iskaka carareyso. gawaarida loo yaqaano 4WD-ka iyo kuwa xamuulka ayaa ugu badan baabuurta laga iibsanayo ajaaniibta oo waliba qiimo aad raqiis u ah laga siisanayo, walow ay baabuurtaas ka iibsadeen canshuurtii xad dhaafka aheyd ee ay bulshada J/hoose ka qaadi jireen ajaanibta maanta dalka ka cararaya ee Al qacida.
Isku soo duuboo Shabaab iyo Alqacida gabalkooda waa dhacay waxaana maanta u dagaalamo kaliya shaqsiyaad aan wax badan ka ogeyn isbedelka Soomaaliya ka soo muuqda ee dalka looga saarayo xiliga kumeel gaarka si dowlad rasmi ah loo helo.
· admin on June 06 2012 15:32:48 · 0 Comments · 1841 Reads ·
14,633,590 unique visits